Maxay Kiiniya ugu dhegan tahay gobolka Gedo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maxay Kiiniya ugu dhegan tahay gobolka Gedo
Sanadkii hore markii la diyaarinayay doorashada dalka waxa madaxweynaha Somaliya Farmaajo balan qaaday inaan maamul jufeedyada kaalintooda maamul jufeednimo ayna soo dhaafin oo barlamaanku kaalintiisa qaato.
Ma jirin cid ka daba hadashay markii madaxweynuhu ku xirey geedkaaas dheer. Intaas kadib wuxuu isku dayay halkii uu ka tirtiri aqalka sare inuu marka hore dhiso maamul jufeedyo dawlada dhexe la shaqeeya.
Waa ku guulaystey laakiin khidada kooxda beesha caalamka sheegata wadatey yaa ah inay soo celiyaan halka ay ka geli karaan siyaasada dalka, waxna ka bedeli karaan doorashada dalka, aduunkana ugu sheegi karaan in Somalidu is maamuli karin.
Su’aasha imaanaysa ayaa ah maxaa Kiiniya ugu dhegan tahay gobolka Gedo ayadoo haysata Kismaayo iyo dhamaan xadka gobolka Jubbada hoose intiisa badan.
Jawaabta oo kooban ayaa ah inaan xadkaas ayna ka soo wareegin dawlada Somaliya ciidan ay leedahay ayna joogaan maleeshiyo taabacsan Kiiniya kadibna ay ugu takri fali karto gobolkaas iyo kheyraadkiisa sida ay jeceshahay, sida xadka oo ay ku soo durugto, si hadhow ayna u imaan gorgortan.
Kiiniya ayaan Somaliya ku soo gelin rabitaanka dawlada Somaliya waxase qorshahan loo dejiyay muddo hore ayadoo arimo badan indhaha ku haysa. Dhamaan qorshayaasheeda waxa wata oo dejiyay dalal shisheeye ah.